ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ အတည်ပြုပြီးသော်လည်း တာဝန်ယူရမည့်ဌာနများ မသတ်မှတ်ရသေး
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် ဦးဝင်းထိန်ကမူ မတ် ၂၅ ရက်နေ့တွင် လက်ရှိဝန်ကြီးများထံမှ လုပ်ငန်းတာဝန်များ လွှဲပြောင်းရယူမည်ဟု ပြောကြားထား
Accor အုပ်စုက မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဟိုတယ်ခြောက်ခု ထပ်မံဖွင့်လှစ်ရန် စီစဉ်ထား
pullman-yangon-myat-min-right-and-the-sebel-myat-min-middle1.gif Pullman Yangon Myat Min ဟိုတယ်ပုံစံငယ်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊ ပဲရစ်အခြေစိုက် AccorHotel အုပ်စုက ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဟိုတယ် ခြောက်ခု ထပ်မံဖွင့်လှစ်သွားမည်ဟု လွန်ခဲ့သည့် ရက်သတ္တပတ်က ပြောကြားခဲ့ကြောင်း ရိုက်တာသတင်းဌာနက ဖော်ပြသည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် AccorHotels အုပ်စုက.
ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်းတွင် အက်ဖ်အမ်အိုင်၏ အစုရှယ်ယာများ စတင်ရောင်းချတော့မည်
ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်း၏ အတွင်းပိုင်းမြင်ကွင်း။ ဓာတ်ပုံ- အေအက်ဖ်ပီ ရန်ကုန်၊ မတ် ၂၃ ရန်ကုန်စတော့အိပ်ချိန်း (YSX) တွင် First Myanmar Investment Co., Ltd. (အက်ဖ်အမ်အိုင်) ၏ အစုရှယ်ယာများအား စာရင်းတင်သွင်းရန် အတည်ပြုချက်ရရှိပြီးဖြစ်သဖြင့် မတ် ၂၅ ရက်နေ့ ဈေးကွက် စတင်ဖွင့်လှစ်ချိန်တွင်.
ခြောက်သွေ့တဲ့ ရာသီဥတုဆိုတာက မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းဒေသတွေအတွက် စိတ်ပျက်စရာ ရာသီတစ်ခု ဖြစ်ပေမဲ့ ဒီနှစ်ရဲ့အယ်လ်နီညိုကြောင့် အခြေအနေတွေက ပိုဆိုးလာခဲ့ပြီး ရေပြတ်တောက်မှုတွေလည်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး တွန်းအားပေးရန် သြစတြေးလျက ပျော့ညံ့နေဟု စွပ်စွဲခံရ
မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကုလသမဂ္ဂ၏ စောင့်ကြည့်မှုများကို လေ ျှာ့ချသွားရေးအတွက် သြစတြေးလျအစိုးရက လိုလားနေသည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရ
အဆိုပြုထားသည့် ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးများစာရင်းတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပါဝင်လာ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ယူခြင်းအားဖြင့် လုံခြုံရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးကောင်စီတွင် ပါဝင်ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
စိုးသန်းလင်း၊ Frontier နှင့် ရှောင် ဂလေစင် ရေးသားသည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင် ငှားရမ်းနိုင်သည့် ရုံးခန်းနေရာ နှစ်ဆတိုးလာ
ရန်ကုန်မြို့လယ်တွင် Sule Square ရုံးခန်းအဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ပြီးစီးနေမှုကို ပြီးခဲ့သည့် ရက်သတ္တပတ်က တွေ့ရစဉ်။ ဓာတ်ပုံ- ဆန်းဦး ရုံးခန်းနေရာသစ် လိုအပ်မှုများပြားလာသည့် ရန်ကုန်မြို့တွင် ၂၀၁၅ ခုနှစ်အကုန်၌ ငှားရမ်းနိုင်သောနေရာ စတုရန်းမီတာ ၂၃၀,၀၀၀ အထိတိုးပွားလာခဲ့ကြောင်း Colliers International Myanmar က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ထိုပမာဏသည်.
ဂျပန်၊ စင်ကာပူနှင့် မြန်မာပူးပေါင်းပြီး ဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံ တည်ဆောက်မည်
စင်ကာပူနိုင်ငံမှ ဖက်စပ် ကုမ္ပဏီတစ်ခုက မြန်မာနိုင်ငံက အကြီးဆုံး စိုက်ပျိုးရေး အခြေပြု စက်မှုလုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့် ပူးပေါင်းကာ ဓာတ်မြေသြဇာစ်ရုံတစ်ခုကို သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်မှာ တည်ဆောက်ဖို့အတွက် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၀ ဒသမ ၅ သန်း ရင်းနှီးမြှတ်နှံသွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုံမှာ Agri First Co.